यस्तो हुन्छ धनी र सम्पन्न हुने मानिसको हस्तरेखा, तपाईको पनि छ की ? – Sandesh Press
July 4, 2021 271
काठमाडौँ । हस्तरेखा विज्ञानको सहायताले मानिसको भूत, भविष्य तथा बर्तमान थाह पाउन सकिन्छ। यस्तै हस्त रेखाका आधारमा भाग्य निर्माण हुने ज्योतिषशास्त्रको दाबी छ । तर यस्ता प्रकारका रेखाहरु जन्म हुनु अगावै निर्धारण हुने जन्मपश्चात यस्तो रेखा निर्माण हुने बताइएको छ ।
यस्तै हस्तरेखाकै आधारमा जिवन ब्यतित हुने गर्दछ । धनी हुने मानिसको हस्त रेखा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी आज हामी तपाईहरुलाई दिन जाँदै छौँ।
हातको अनामिका औलाको फेदको भागमा सूर्य पर्वत रहेको हुन्छ । सूर्यको रेखा स्पष्ट भएमा सरकारी क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रगती गर्न सक्छन् । त्यसका साथै हातको सोही स्थानमा त्रिभुज समेत छ भने त्यस्ता ब्यक्तिहरुको राम्रो प्रभाव देश तथा बिदेशमा रहने हस्तरेखा बिज्ञानको मान्यता रहेको छ।
Prevऋणबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अप्नाउनुहोस्
Nextनारायणगढ–मुग्लिन सडक फेरि अवरुद्ध, गोरखा र मनाङ्गको अवस्था झनै पीडादायी
आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार: चम्किदैछ यी ७ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
मोडल निशा घिमिरेलाई आज फेरी अस्पतालमा २ जना भारतीयले पिछा गरे
राजेशपायल राईमाथि हा’तपा’त भएको होइन, फ्यानले अंगालो हालेका हुन् : आयोजक
लामो समयदेखि बन्द रहेको विद्यालयहरु सञ्चालन हुने मिति तोकियो।